Nahume 1 | IBhayibheli Elikuyi-Internet | INguqulo Yezwe Elisha
1 Isimemezelo ngeNineve:+ Incwadi yombono kaNahume umElikoshi: 2 UJehova unguNkulunkulu ofuna ukuzinikela kuye kuphela+ futhi uyaphindisela; uJehova uyaphindisela+ futhi ukulungele ukuveza ukufutheka.+ UJehova uyaziphindiselela kwabamelene naye,+ futhi uzithukuthelele izitha zakhe.+ 3 UJehova uyephuza ukuthukuthela,+ mkhulu ngamandla,+ futhi uJehova akasoze ayeka ukujezisa.+ Indlela yakhe isemoyeni obhubhisayo nasesivunguvungwini, futhi ungqimba lwamafu luyibhuqu lwezinyawo zakhe.+ 4 Ukhuza ulwandle,+ uyalomisa; empeleni wenza yonke imifula yome.+ IBhashani neKarmeli kubunile,+ nayo kanye imbali yaseLebhanoni ibunile. 5 Izintaba ziye zazamazama ngenxa yakhe, namagquma azithola encibilika.+ Umhlaba uyofukuka ngenxa yobuso bakhe; nezwe elikhiqizayo futhi, nabo bonke abahlala kulo.+ 6 Ngubani ongema abhekane nokulahlwa nguye?+ Ngubani ongasukuma amelane nokuvutha kwentukuthelo yakhe?+ Ukufutheka kwakhe ngokuqinisekile kuyothululwa njengomlilo,+ amadwala ayodilika impela ngenxa yakhe. 7 UJehova muhle,+ uyisiphephelo+ ngosuku lokucindezeleka.+ Futhi uyabazi labo abafuna isiphephelo kuye.+ 8 Uyoyiqothula ngokuphelele indawo yalo ngesikhukhula esidlulayo,+ futhi izitha zakhe ziyoxoshwa ngubumnyama.+ 9 Yini nina madoda eniyoyisongoza ngoJehova?+ Uqothula kungasali lutho. Usizi ngeke luvuke okwesibili.+ 10 Nakuba bethandelene njengameva+ futhi bedakiwe ngokungathi badakwe utshwala babo bukakolweni,+ ngokuqinisekile bayoshwabadelwa njengezinhlanga ezome ngokuphelele.+ 11 Empeleni kuyophuma kuwe umuntu osongoza okubi ngoJehova,+ ohlosa okungenanzuzo.+ 12 Yilokhu uJehova akushilo: “Nakuba babephelele futhi bebaningi ababekuleso simo, noma kunjalo bayonqunywa;+ umuntu uyodabula adlule. Ngokuqinisekile ngizokuhlupha, ngingabe ngisakuhlupha futhi.+ 13 Manje ngizokwephula ugodo lwakhe lokuthwala ngilususe phezu kwakho,+ ngizigqabule nezibopho eziphezu kwakho.+ 14 Ngokuphathelene nawe uJehova uyalile, ‘Ngeke kusahlwanyelwa lutho lwegama lakho.+ Ngizonquma endlini yonkulunkulu bakho umfanekiso nesithombe esincibilikisiwe.+ Ngizokwenzela ingcwaba,+ ngoba uye waba ngongento yalutho.’ 15 “Bheka! Phezu kwezintaba izinyawo zoletha izindaba ezinhle, omemezela ukuthula.+ O Juda, gubha imikhosi yakho.+ Gcwalisa izifungo zakho;+ ngoba umuntu ongelusizo lwalutho ngeke aphinde adabule kuwe.+ Nakanjani uyonqunywa aphele.”+